Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Isi ọrụ teknụzụ n'afọ na-abịa bụ ịbawanye ego ha nwetara
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
Mmasị maka teknụzụ iji nyere ụlọ ọrụ njem aka ịchọta ndị ahịa ọhụrụ karịa inye aka idowe ndị dị adị emeela ka nku anya ole na ole
Ndị ọkachamara n'ụlọ ọrụ achọpụtala "ịnye aka n'ịbawanye ego ha nwetara" dị ka ọrụ bụ isi nke teknụzụ n'ime ọnwa iri na abụọ na-abịa, na-ekpughe nyocha ewepụtara taa (Mn 1 Nọvemba) nke WTM London na Travel Forward wepụtara.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị isi 700 sitere gburugburu ụwa ka a gwara ka ha nye ọkwa, site n'usoro dị mkpa, ikpe dị iche iche maka teknụzụ njem, maka akụkọ WTM Industry.
Ịbawanye ego ha nwetara dị ka nke kachasị mkpa, yana mbelata ọnụ ahịa nke atọ na ndepụta ahụ, na-egosipụta abụọ n'ime nnukwu nsogbu azụmahịa njem na-eche ihu n'oge dị mkpirikpi ruo ọkara.
Nkà na ụzụ na-enwekarị ọrụ dị mkpa ọ ga-arụ n'ịzụ ahịa na njide ndị ahịa, na akụkọ WTM Industry Report na-egosi na ọrụ a ga-achọ n'ime ọnwa iri na abụọ na-esote. N'ụzọ na-akpali mmasị, akụkọ ahụ na-eme ka ọ pụta ìhè na ụlọ ọrụ ahụ nwere mmasị na-eji teknụzụ iji chọta ndị ahịa ọhụrụ na / ma ọ bụ ahịa ahịa ọhụrụ karịa ka ọ na-ejigide na iso ndị ahịa dị ugbu a na-emekọrịta ihe. Nke mbụ họọrọ nke abụọ, nke ikpeazụ wee nọrọ nke anọ.
N'ebe ọzọ, echiche ndị dị ka iji teknụzụ mepụta ngwaahịa na ọrụ ọhụrụ, ma ọ bụ iji teknụzụ na-emekọghachi ndị ọrụ ka e nyere obere ibu site na nlele.
Simon Press, Onye isi ngosi ngosi, WTM London na Travel Forward, kwuru, sị: “Nchọpụta a ekwesịghị ịbụ ihe ijuanya - ụlọ ọrụ njem ga-achọ ịbawanye ego ha na-enweta ma belata ọnụ ahịa, n'oge na-adịghị anya, ka ha wee nwee ike ịmalite ịghaghachi azụ ụfọdụ n'ime mfu ndị ahụ. nke gbara mmanụ n'oge ọrịa.
"Mmasị maka nkà na ụzụ iji nyere ụlọ ọrụ njem aka ịchọta ndị ahịa ọhụrụ kama inye aka na-ejigide ndị dị adị emeela ka nku anya ole na ole. Otú ọ dị, enwere nchekwube dị n'etiti nchọpụta a, ebe ọ na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ nwere obi ike na ọnọdụ ahịa n'ime ọnwa 12 na-esote ga-akwado uto na mgbasawanye ndị ahịa. "